रानीपोखरीमा कफी सप राख्न लागेपछि रञ्जु दर्शनाले मेयर विद्यासुन्दरलाई भेटेर यसो भनिन् – Todays Nepal
रानीपोखरीमा कफी सप राख्न लागेपछि रञ्जु दर्शनाले मेयर विद्यासुन्दरलाई भेटेर यसो भनिन्
By Todays Nepal | नेपाल आज	 Last updated Dec 21, 2017
विवेकशिल साझाकी नेता रञ्जु दर्शनाले काठमाण्डौमा निर्माणाधिन रहेको रानीपोखरीमा कफी सप राख्न लागिएको भन्दै आपत्ती जनाएकी
छन् । उनले रानीपोखरीको पुननिर्मा पुरानै ढांचामा हुनुपर्ने बताएकी छन् । रानीपोखरीको पुननिर्माण थालके महानगरपालिकाले त्यहां कफि सप लगायतका कुरा समेत थप्न लागेपछि उनले आपत्ती जनाएकी हुन् । उनले यस विषयमा महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसंग भेट गरेर यस विषयमा छलफल समेत गरेकी छन् ।
रानीपोखरी पुरातात्विक सम्पदा भएकाले यसमा आधुनिकिकरण गर्ने नाममा जथाभावी गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । उनले पुरानै ढांचामा रानीपोखरीको पुननिर्माण हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
रानीपोखरीलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक भएकाले सफी सप लगायतका चिज पनि थप गर्न लागको बताएका र्थिए । तर उनले पुरातात्विक महत्वको सम्पदाको स्थानमा आधुनिक कफी सप आवश्यक नभएको बताएकी छिन् । उनले काठमाण्डौमा कफि खाने ठाउंको कमी नभउकाले रानीपोखरीमै कफि सप बनाउन आवश्यक नभएको बताएकी छन् । रञ्जु माठमाण्डौ महानगरपालिकाको पराजित मेयर उम्मेदवार हुन् ।
केपी ओली संग किन डराउछ भारत ? मन थामेर हेर्नुस आंग सिरिङ्ग हुने भिडियो
मलेसियामा रहेका ५ लाख बढी नेपाली कामदारालाई खुशीको खबर, जनवरी १ देखि लेभी तिर्नु नपर्ने
नेपाल सरकारकै निसान छापको नक्सामै कालापानी गायब, भारतलाई सहयोग पुग्ने खुलासा !
प्रधानमन्त्री ओली कहाँ पुगेर अड्कियो ३३ किलो सुन काण्ड !
नेपालीका लागि आज अत्यन्तै खुशीको दिन : भत्ता र रोजगारी दिलाउने विधेयक संसदमा पेश
अब विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्न सकिने